Qaabka xayeysiiska 3D Swirl ee Google hadda waxa lagu heli karaa DV360 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Qaabka xayeysiiska 3D Swirl ee Google hadda waxa lagu heli karaa DV360
Qaabka xayeysiiska 3D Swirl ee Google hadda waxa lagu heli karaa DV360
Swirl, qaabka bandhiga is dhexgalka mobaylka ee Google bilaabay tijaabinta sannadkii hore ayaa hadda diyaar u ah in la soo bandhigo & Video 360 macaamiisha adduunka oo dhan.
Isticmaalayaashu way beddeli karaan, way-dhajin karaan oo way kordhin karaan walxaha 3D ee xayeysiisyada Swirl. Noocyada tijaabiyay xayeysiisyada waxaa ka mid ah Purina, Nissan, Adidas iyo Belvedere Vodka, Google ayaa ku sheegtay ogeysiiska.
Sida ay u shaqeeyaan. Haddii aad haysato hantida 3D ee jirta, ku dheji Naqshadeeyaha Shabakadda Google oo dooro mid ka mid ah qaab-dhismeedka Swirl ama ka samee hal-abuur meel eber ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Poly, Google's design 3D si aad ugu habayso moodooyinkaaga 3D ee xayeysiisyada Swirl.
Xayeysiisyada Swirl ayaa lagu heli karaa saddex cabbir iyo ballaarinta shaashadda buuxda waa ikhtiyaar. Xayeysiintu waxay ku socotaa guud ahaan liiska Maareeyaha Xayeysiiska Google.
Xayeysiyeyaashu waxay helayaan wakhtiga ka-qaybgalka iyo nooca (wareejinta iyo balaadhinta) cabbirada DV360.
Sababta aan u danayno. Fikradda maaha mid cusub, xayeysiisyada isdhexgalka ayaa jiray sanado badan oo ka yimid tiro iibiyayaal tignoolaji ah. Tani waxay la macno tahay uun xayaysiiyayaasha isticmaalaya DV360 inay samayn karaan oo ay bilaabi karaan xayaysiisyada 3D asal ahaan gudaha nidaamka deegaanka Google. Taasi waxay u badan tahay inay dhaawacdo qaar ka mid ah hal-abuurayaashii hore ee meeshan. Astaamaha qaabka Swirl Advanced waxaa ka mid ah meelo badan oo muujinaya tafaasiil dheeraad ah, midab-dooriye iyo doorashooyin kale. Wixii dheeraad ah, eeg bogga caawimada.
Maxaa ka dambeeya buunbuuninta ku saabsan Platform-ka Xogta Macmiilka?
25 Xaqiiqo oo Cajiib ah oo ku saabsan Facebook